भ्यालेन्टाइन स्पेशल - साप्ताहिक
कृष्ण भट्टराई, फाल्गुन ५, २०७५
हलिउड–बलिउडझैं नेपाली चलचित्र उद्योगमा पनि सेलिब्रेटीहरूको लभ–रोमान्स तथा ब्रेकअपको श्रृंखला चलिरहन्छ । कुनै एउटा चलचित्रमा सँगै काम गर्नेबित्तिकै रोमान्समा परेको गसिप बन्नु तथा दोस्रो चलचित्रमा त्यही जोडी दोहोरिएन भने ब्रेकअप भएको अनुमान गर्दै पुन: अर्को गसिप बन्नु नौलो कुरा रहेन । यद्यपि हामीले भ्यालेन्टाइन्स डेको अवसर पारेर छ वटा त्यस्ता जोडीका बारेमा सामग्री तयार पारेका छौं, जो रियल लाइफमै रोमान्स गरिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
१४ थरी चुम्बन
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन २, २०७५
एयरबल किस : एयरबल किसलाई सबैभन्दा संवेदनशील चुम्बनका रूपमा लिइन्छ । यो कान र कानको वरपरको भागमा गरिने चुम्बन हो । यो प्रेमीहरूबीचको सबैभन्दा रोमान्टिक चुम्बन हो । पुरा पढ्नुहोस्
प्रेमी–प्रेमिकाको जोडीदेखि श्रीमान्–श्रीमतीलाई लक्षित गरेर धेरै किसिमका खेलहरू विकसित गरिएका छन् र ती खेल विश्वका विभिन्न भागमा लोकप्रिय छन् । यी खेल जोडीहरूबीच भावनात्मक सम्बन्ध बढाउने ध्येयले विकास भए पनि यसले पाउन थालेको लोकप्रियताले ठूलै प्रतियोगिताको रूप लिँदै गएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
हङकङेली प्रेम ! आईडी कि मन ?
अनोज रोक्का, फाल्गुन २, २०७५
पछिल्लो समय हङकङमा नक्कली विवाह गरिएको सम्बन्ध समाचारहरु आए, धेरैले सामाजिक सञ्जालमा सचेतनाको लागि सेयर गर्नुभयो, आजको दिवसमा हामी यहि सेरोफेरोलाई नियालिरहेका छौ । समाचारमा सम्प्रेषण गरिएको नेपाली शब्दले सवैको मन पोल्यो । गलत काममा आफ्नो समुदाय मुछिएको प्रति धेरैले चासो र चिन्ता ब्यक्त गर्नुभयो । पुरा पढ्नुहोस्
विदेश घुमेर चर्चामा आएका नेपाली दम्पती
एक नेपाली दम्पतीले जागिरबाट समय निकालेर २ वर्षको अवधिमा ४० मुलुक घुमेको कुराले अहिले विश्वव्यापी चर्चा पाइरहेको छ । हाल बेलायतको डर्टफोर्डमा बसोबास गर्ने संगम भण्डारी तथा उनकी श्रीमती शिखा न्यौपानेले गरेको विदेश भ्रमणको उपाय पनि रोचक छ । पुरा पढ्नुहोस्
रोमान्टिक मुडका लागि पहिरन
रोजिन शाक्य, फाल्गुन १, २०७५
मुस्कान गुरागाईको सिर्जना भ्यालेन्टाइन डेको साँझको समयका लागि लक्षित मर्मेड गाउन हो । प्रणय दिवसको मुख्य रंग रातोमा प्रस्तुत गरिएको यो पहिरनलाई शियर लेस फ्याब्रिकमा परिकल्पना गरिएको छ जसमा पर्लको आकर्षण छ । यो फुल लेन्थ पहिरनमा देब्रे खुट्टातिर भुईं देखि लोअर थाईसम्म स्लिट राखिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रेम, यौन र जीवन
डा. टीकाराम पोखरेल, माघ २९, २०७५
विवाहपूर्वको प्रेममा समान हैसियतमा रहेका दुई व्यक्ति विवाहपश्चात् फरक–फरक भूमिकामा पुग्छन् । भूमिका फरक हुन्छ भने व्यवहार पनि फरक हुनु स्वाभाविक हो । विवाहअघि मनोवैज्ञानिक धरातलमा एक–अर्कालाई स्वच्छन्द प्रेम गरिरहेका प्रेमी–प्रेमिका जब पति–पत्नीमा परिणत हुन्छन् तब व्यवहार पनि प्रेमी–प्रेमिकाको होइन पति–पत्नीकै हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रेम शाश्वत हुन्छ
दुर्गाप्रसाद घिमिरे, माघ २८, २०७५
प्रेम र प्रणय सम्बन्धलाई आधार बनाएर विश्व साहित्यमा महान् कलाकृति र अमर सिर्जनाहरू रचना गरिएका छन् । स्रष्टाहरूले सिर्जना गरेका काल्पनिक पात्रहरू पनि अमर प्रेमका प्रतीकका रूपमा हाम्रा सामु छन् । आदम–इभ, लाल–हिरा, लैला–मजुन, रोमियो–जुलियट, मुकुन्द–इन्दिरा, मुना–मदन आदिलाई सफल र आदर्श प्रेम जोडीका रूपमा लिन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रणय दिवसमा रोमान्स
राजाराम पौडेल, माघ २८, २०७५
मानिसहरूलाई घुम्न तथा रमाउन बहाना चाहिएको छ । प्रणय दिवस पनि त्यस्तै बहानामध्ये एक हो । यो दिन प्रेममा रहेका युवायुवती तथा विवाहित जोडी घुमघाममा हुन्छन् । यस्ता जोडी समय भए लामै यात्रामा समेत निस्कन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
बालिका थपलिया, माघ २८, २०७५
रहस्य र रामरमितामय प्रेमलाई जति नै अथ्र्याउन र परिभाषित गर्न खोजे पनि अधुरो नै रहन्छ । सन्दर्भपिच्छे प्रेमलाई फरक–फरक तरिकाले परिभाषित गर्छन् मानिसहरू । प्रेम सफल हुनेहरूले यसलाई आनन्दको सागर रूपमा व्याख्या गर्छन् । असफल हुनेहरूले पीडाको सागर भन्छन् । कसैको जिन्दगीमा यो बसन्त बनेर आउँछ भने कसैको जिन्दगीमा भुइँचालो । पुरा पढ्नुहोस्
मितिनीकै कारण हामी एक–अर्काको भयौं है !
प्रस्तुति : कृष्ण भट्टराई, माघ २८, २०७५
पहिलो चलचित्र ऐश्वर्यबाट रजतपटमा स्थापित हुन सफल अभिनेत्री हुन्– दीपिका प्रसाईं । दोस्रो चलचित्र छक्का पञ्जा–३ को अभिनयबाट दीपिकाले आफूमा भएको अभिनय क्षमता प्रमाणित गरिसकेकी छिन् । दिवाकर भट्टराई युवा निर्देशक हुन् । दुई वर्षदेखि प्रेमि–प्रेमिकाका रूपमा रहेका दीपिका र दिवाकरको जोडीले केही महिनाअघि इन्गेज्मेन्ट गरेर कोर्ट म्यारिजसमेत गरिसकेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्